Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Oo Kulan Layeeshay Guddiga Dib u Heshiisiinta Qaranka(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Oo Kulan Layeeshay Guddiga Dib u Heshiisiinta Qaranka(Daawo Sawirada)
Kulankan ayaa ku saabsanaa mid wada tashi ah oo ku aadan dib u heshiisiinta dalka iyo sidii loo dar dar gelin lahaa howlaha Guddiga dib u heshiisiinta Qaranka.
Guddoomiyaha Guddiga Dib u heshiisiinta Qaranka Ismaaciil Macallin Muuse oo hadalka furay ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga mahad celiyay waqtiga uu siiyay Guddiga dib u heshiisiinta Qaranka si ay uga wada hadlaan arimo badan oo la xiriira dib-u hishiisiinta.
Intaas kadib, Guddoomiyaha waxaa uu faah faahin dheer ka bixiyey howlihii ugu muhimsanaa ee uu Guddigu soo qabtay muddooyinkii ugu dambeeyey, gaar ahaan sanadihii 2014 – 2015.
Guddoomiyuhu waxaa uu sawir guud ka bixiyey in ay dib u heshiisiintu u qeybsan tahay laba qeybood oo kala ah:
Ø Dib u heshiisiinta bulshada iyo deegaannada; iyo
Ø Dib u heshiisiinta siyaasadda
Dib u heshiisiinta Bulshada iyo Deegaannada:
Waxaa u warbixin ka bixiyey meelihii ugu muhimsanaa ee uu Guddiga Dib u Heshiisiinta Qaranku ka sameeyay howlaha dib u heshiisiinta bulshada iyo deegaanada, waxaana ka mid ahaa Gobolka Shabeellaha Hoose oo labo beelood ku dagaalameen.
Guddiga dib u heshiisiinta Qaranka oo kaashanaha Wasiirada ayuu sheegay inay sameeyeen dib u heshiisiin iyo wada hadal bulsho oo heer degmo iyo heer deegaan ah.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa mar uu ka hadlayay dib u heshiisiin ay ka sameeyeen Shabeellaha Dhexe ayuu xusay in labo beelood oo sanad ka hor ku dagaalamay halkaas ay dib u heshiisiin u sameeyeen, isagoo tilmaamay in kulan ballaaran oo dib u heshiisiin ah uu ka dhacay degmada Jowhar.
Guddoomiyaha Guddiga dib u heshiisiinta Qaranka Ismaaciil Macalin Muuse ayaa sheegay inay sidoo kale ka qeyb qaateen shir dib u heshiisiin ah loo qabtay labo beelood oo ku dagaalamay Gobolka Hiiraan, sidoo kale waxaa uu xusay in wafdi ka socda Guddiga dib u heshiisiinta ay ku baxeen beelo ku dagaalamay Mudug iyo Galgaduud, isla markaana mar walba colaada labada beelood ay soo noq noqotay.
Guddoomiyaha Guddiga dib u heshiisiinta ayaa hoosta ka xariiqay in la qabto shir wayne dib u hehsiisiin oo la isugu keeno dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada si la isugu cafiyo, loona helo heshiis bulsho oo waara.
Waxaa kaloo Guddoomiyaha Guddiga dib u heshiisiinta uu soo hadal qaaday dib u heshiisiinta siyaasada, isla markaana muhiim tahay in dalka uu gaaro dib u heshiisiin waarta iyo xasilooni siyaasadeed, isla markaana dhex dhexaadin siyaasadeed laga sameeyo dhinacyada isku haya siyaasada dalka sida:-
• Puntland & Dowladda Federalka
• Puntland & Galmudug
• Galmudug & Ahlu-sunna
• Jubbaland & Dowladda Federalka
• Jubbaland & Gobolka Gedo
• Wadahadalki Somaliland & Dowladda Federalka oo horey loo sii wado.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaaraha ayaa shirka soo gaba gabeeyay, waxaana uu soo dhoweeyay xubnaha Guddiga Dib u heshiisiinta Qaranka talooyinkii ay u soo gudbiyeen iyo howlihii dib u heshiisiinta ee ay dalka ka wadeen.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu garowsan yahay in Guddiga dib u heshiisiinta Qaranka uu yahay mid sharci ah, inta laga sameynayo Guddi kale oo badala, sida ku qoran dastuurka, isla markaana guddigan sii wadayp howsha dib u heshiisiinta.
Waxaa uu sheegay in dagaalo beeleedyo ay ka dhaceen Gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, waxaana uu ugu baaqay Guddiga inuu u istaago xalkiisa iyo sidii lagu dhameyn lahaa, isla markaana keenaan barnaamij ku saabsan habka dib u heshiisiinta loo marayo.
Qaramada Midoobey Oo Canbaareysay Werarkii Shalay Lagu Qaaday Saldhiga Ciidamada AMISOM kulahaayeen Janaale